यहोवाका साक्षीहरूको अधिवेशन २०२२
शान्ति कायम गरिरहौँ!
हामी तपाईँलाई यहोवाका साक्षीहरूले आयोजना गर्ने तीन दिने अधिवेशनको कार्यक्रम हेर्न आग्रह गर्छौँ।
कोभिड-१९ महामारीको कारण यस वर्षको अधिवेशनको कार्यक्रम jw.org/ne मा उपलब्ध हुनेछ। कार्यक्रमका भागहरू जुलाई र अगस्त महिनामा क्रमशः राखिनेछ।
निश्‍शुल्क कार्यक्रम। लग इन गर्न वा खाता बनाउन पर्दैन।
पहिलो दिन: प्रेमले मनोशान्ति पाउन र अरूसित शान्ति कायम गर्न कसरी मदत गर्छ, बुझ्नुहोस्‌। परिवारमा शान्ति कायम गर्न बाइबलमा विवाहित दम्पती, आमाबुबा र छोराछोरीका लागि कस्तो सल्लाह दिइएको छ, थाह पाउनुहोस्‌।
दोस्रो दिन: के हामी रोगबिमार, आर्थिक समस्या, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य समस्याहरूको बाबजुद शान्ति अनुभव गर्न सक्छौँ? संसारका थुप्रै ठाउँका मानिसहरू शान्ति कायम राख्न के गर्दै छन्‌ भनेर देखाइएको एउटा प्रोत्साहनदायी भिडियो हेर्नुहोस्‌।
तेस्रो दिन: के हामी परमेश्‍वरको साथी बन्‍न सक्छौँ? के आफसेआफ परमेश्‍वरको साथी बन्‍न सकिन्छ वा हामी आफैले केही गर्नुपर्छ? यी प्रश्‍नहरूको जवाफ थाह पाउन “हामी कसरी परमेश्‍वरको साथी बन्‍न सक्छौँ?” विषयको बाइबलआधारित भाषण सुन्‍नुहोस्‌।
कार्यक्रमको तालिका र हाम्रो अधिवेशनसम्बन्धी भिडियो हेर्नुहोस्‌।
यहोवाका साक्षीहरूको अधिवेशन २०२२: शान्ति कायम गरिरहौँ!
हामी जीवनमा विभिन्‍न समस्या भोग्छौँ, जसले हाम्रो शान्ति खोस्न सक्छ। “शान्ति कायम गरिरहौँ!” अधिवेशन कार्यक्रम हेर्नुहोस्‌ अनि अहिले र सधैँभरि साँचो शान्ति पाउन के गर्नुपर्छ भनेर थाह पाउनुहोस्‌।
भिडियो-नाटकको ट्रेलर: यहोवा हामीलाई शान्तिको बाटोमा डोऱ्‍याउनुहुन्छ
यहोवाले कसरी आफ्नो वचन क्रमिक रूपमा पूरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि कसरी आफ्ना मानिसहरूलाई शान्तिको बाटोमा डोऱ्‍याउँदै हुनुहुन्छ, याद गर्नुहोस्‌।
हाम्रा अधिवेशनहरूमा के हुन्छ?
हरेक वर्ष संसारभरि यहोवाका साक्षीहरू तीन दिने अधिवेशनको लागि भेला हुन्छन्‌। ती अधिवेशनहरूमा के-के हुन्छ, आफै हेर्नुहोस्‌।
तपाईँको अनुदान कसरी प्रयोग गरिन्छ?
टेलिभिजन अनि रेडियोमार्फत अधिवेशनको कार्यक्रम प्रसारण
सन्‌ २०२० को अधिवेशन इन्टरनेटमार्फत उपलब्ध गराइएको थियो। तर मलावी र मोजाम्बिकमा धेरै जनासँग इन्टरनेटको सुविधा छैन। त्यसोभए उहाँहरूले अधिवेशनबाट कसरी लाभ उठाउनुभयो?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने यहोवाका साक्षीहरूको वार्षिक अधिवेशन
सन्‌ २०२२ को अधिवेशन हेर्नुहोस्‌—शान्ति कायम गरिरहौँ!